Ọrụ - Suzhou Funncycle Intelligent Technology Co., Ltd.
Sebic na-elekwasị anya na mmepe na mmepụta nke ugbo ala eletrik, ma kpebisie ike inye gị ọrụ kachasị mma.
Yabụ kedu ka anyị ga-esi ghọta mkpa gị?
Nke mbụ, na-agagharị na ngwaahịa anyị ma họrọ ọkacha mmasị gị nlereanya.
Mgbe ahụ,lee anya maka nlekọta ọrụ ndị ahịa na akụkụ aka nri ala nke ibe ahụ ma tinye ihe ị chọrọ. Anyị ga-agwa ndị otu R&D nke ụlọ ọrụ ahụ okwu ma nye anyị atụmatụ. Ihe anyị nwere ike ịme maka gị! EBIKE, Nhazi ngwaahịa
Anyị bụ ụlọ ọrụ na-elekọta ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa ahịa. Ọ bụrụ na ọ bụ mkpa onwe onye, ​​anyị na-emeghe mgbe ụfọdụ ịnakọta ego. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, biko denye aha dịka onye otu anyị ma soro akaụntụ facebook anyị.
Have nwere echiche ngwaahịa ọhụrụ?
Anyị nwere ike ịme ya na ụlọ ọrụ anyị
OWU NA UMUAKA
Ọtụtụ mmadụ na-ajụ ihe ọrụ na ndozi achọrọ iji na-agba ọsọ igwe eletrik (eBike). Nke a bụ ụfọdụ ozi dị mkpa na ndụmọdụ izugbe iji mee ka eBike gị na-agba ọsọ dị ka nrọ!
Dị ka usoro okirikiri ọ bụla, eBike gị ga-achọ mmezi oge niile; ma agbanyeghị akụkụ eletrik nke a ka ọ bụrụ na ọ ga-achọ obere mmezi.
Ọtụtụ ndị na-abụghị eBikers kwenyere na igwe eletriki eletrik na-ejikwa nsogbu mmezi, mana nke a abụghị eziokwu. Ọ bụrụ na gị, onye ọrụ, mee ihe ndị bụ isi iji mee ka igwe kwụ otu ebe gị na-agba ọsọ ọ gaghị achọ ihe karịrị igwe kwụ otu ebe. Ka emechara ma ọ bụrụ na ị na-emeso eBike gị ọ ga-eme gị nke ọma na nloghachi.
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa ga-enye ntọala zuru oke na igwe kwụ otu ebe, nke dị mkpa dịka eBike kwesịrị ịtọ ntọala n'ụzọ ziri ezi na nke mbụ iji rụọ ọrụ nke ọma.
Fọdụ ndị na-ere ahịa na-enyekwa ọrụ ọzọ anaghị akwụ ụgwọ ozugbo eBike lakpuru ụra. Nke a bara uru ma baa uru iji ya mee ihe n'ihi na ọ nwere ike were kilomita ole na ole maka mkpọchi ọhụrụ ị ga-ehi ụra, eriri iji gbatịa wdg. oge i nwere ike inwe ya niile re-tightened, na brek na Kwadobe enyocha wdg Nke a bụkwa ezigbo oge ịgbanwe na awkward iru ala sadulu, egosiputa Ogwe ubé dị iche iche na-eme ka ọ bụla ọzọ obere mgbanwe na-enye a ọzọ ala na-agba ịnyịnya.
Iji nweta ndụ kachasị ogologo site na eBike gị, ịnwere ike ịme ụfọdụ ụzọ dị mfe iji kwado ya n'onwe gị, na-enweghị njem mgbe niile na onye na-ere ahịa. Ndị a bụ ndụmọdụ usoro izugbe iji nyere gị aka -
- Mee ka eBike gị dị ọcha. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume hichaa ya mgbe ọ bụla ịnyịnya ígwè na igwe nhicha akọwapụtara.
- Ejila ịkwọ ụgbọ mmiri ma ọ bụ otu ihe n'ihi na nke a nwere ike ịmịpụta mmanụ griiz na-agbapụta, ọ ga-etinye mmiri n'ime internals nke ga-emebi ihe dị mkpa.
- Ọ bụrụ n ’iji sooks dị elu kpachara anya ka ị ghara ịba mmiri na nso nso ebe a na - ahụ ike, aka mgbodo, isi okwu ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ ana - ete mmanụ n’ebe niile.
- bikefọdụ igwe na-enwu gbaa nwere ike ịhapụ akwa nchekwa n’elu agba agba, nyere aka mee ka eBike gị dị ka ọhụụ maka ogologo oge. Kpachara anya ka ị ghara ị nweta ihe a na ebe ọ bụla ị ga - eme ihe ọ bụla!
- Jiri ezigbo agbụ mmanụ iji debe agbụ ahụ mgbe ekpochachara, gbaa mbọ hụ na ahapụghị ya kpọrọ nkụ. Wet lube n'oge oyi na akọrọ lube n'oge ọkọchị. (Wet lube na-anọ mmiri, akọrọ lube dries).
- nwere ike lube Gịnị na ìhè ịgba mmanụ, ọkacha mma onye na-dries na doo a PTFE oyi akwa. Ọ bụrụ na iji mmanu na-adị mmiri mmiri, na ájá ọzọ na-apụ apụ nwere ike ịrapara na nke a na-akpata nsogbu ndị ọzọ ma nwee ike ime ka eriri jide. (Na PTFE ọ ga-akpọ nkụ mana hapụ oyi akwa).
- Mgbe igwe kwụ otu ebe anaghị eji ya, gbalịa idebe ya na nkụ site na ihe ndị ahụ.
- Debe taya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Nke a ga - egbochi ịkpụ taya. Ọ ga - emekwa ka ndụ gị dịkwuo mfe dịka igwe kwụ otu ebe ga - agagharị n’enweghi nsogbu. N'aka nke ọzọ, moto ahụ na-arụ ọrụ pere mpe ma gbasaa ogologo. Nke a nwere ike ime ka ihe dị iche karịa ka ị chere. (A na-ebipụta nrụgide Taya n'akụkụ taya gị).
Mmezi Motor & Battery
Imirikiti motọ ụbọchị ndị a bụ akara ma ọ bụ na ha agaghị arụ ọrụ, yabụ ọ bụrụ na ọ mehiere, a ga-edochi ya kama idozi ya, obere mmezi ebe a.
Ọ bụ otu ihe ahụ na batrị; agbanyeghị ịnwere ike ịgbatị ndụ batrị gị. Dịka ọmụmaatụ ịdebe ya elu, ịhapụ ịhapụ ya ka ọ gbasaa ruo ogologo oge, ịhapụ ya na anwụ na-achasi ike ruo ogologo oge ma ghara ịhapụ ya na oyi na-atụ oyi ruo ọtụtụ ọnwa ma ọ bụrụ na anaghị eji ya. Imirikiti nsogbu batrị m na-ahụ bụ ebe ndị mmadụ leghaara batrị ha anya, ma ọ bụ hapụ ha ruo ọtụtụ afọ na afọ tupu ha alọghachikwute ha na-atụ anya ka ha rụọ ọrụ dịka ha mere mgbe ọhụụ!
N'iji mkpụrụ ndụ Lithium nke oge a, ọ ka mma ịdebe batrị elu. Yabụ ọ bụrụgodi naanị ịga obere okirikiri dị mkpụmkpụ iri n'okporo ụzọ ahụ, ọ ka mma na batrị ga-agbago elu mgbe njem ahụ gbadosịrị ịhapụ ya ka ọ gbapụ ma kwụghachi ya azụ.
Ọ bụrụ na batrị yiri ka ọ na-emebi, ikike ụlọ ahịa eBike dị mma ga-enyocha ya. Dị ka ihe atụ, batrị na-ajụ oyi ma ọ bụ hapụ ya na ndọk ahụ maka ogologo oge, ọ nwere ike irite uru site na usoro nhazi zuru ezu. Ime nke a na-agba ọsọ batrị kpamkpam ewepụghị ya ụgwọ ya ozugbo azụ. Nke a kwesịrị ido batrị ahụ ka ọ kwuo. Ọ nwere ike ịba uru ịme ya ugboro abụọ iji jide n'aka.
Battery pack nwere ike mejuputara otutu sel ma oge ufodu sel ndia na adighi nma. Ọtụtụ batrị nke oge a na-edobe onwe ha n'ụzọ ziri ezi, yana BMS, (Battery Management System) agbanyeghị ọ ga-ekwe omume ịkwanye mkpụrụ ndụ nke ọ bụla iji dozie ha niile. Ekwesịrị ime nke a site na ụlọ ahịa eBike dị mma n'ụzọ ziri ezi.
Nsogbu Ọdụdọ, gịnị ka ị ga-eme?
Y’oburu n’inwe nsogbu n’ eletrik na eBike gi, kpotara onye ahia nke i zutara igwe kwụ otu ebe. Ha kwesịrị inwe ahụmahụ iji nyere gị aka.
Ọ bụrụ na ịnweghị ahụmahụ, ewela igwe eletrik ọ bụla. Ewepụla mkpuchi plastik ọ bụla n'ihi na ị nwere ike imebi internals yana mebie akwụkwọ ikike; nke a kwesiri ime site na onye oru eBike.
Ọ bụrụ na ị kpebie 'ịgbachi' ijide n'aka na ị nwere traktị ndọta ma ọ bụ ụfọdụ ụzọ nwere bolts wdg. Dịka ọnụọgụ nwere ike ịdapụ ka ị mepee ikpe ahụ.
Ọ dị mma mgbe niile ịtọgbọ akụkụ ka ị wepụrụ ha; n'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe echiche ọjọọ banyere otu esi agaghachi ya.
Tupu ịlaghachi na onye na-ere ahia, ị nwere ike ịchọ ịlele njikọta eletriki: ọ nwere ike ịbụ ezigbo nsogbu. Kwuo na ị kụrụ ngọngọ siri ike n'okporo ụzọ ma wepụ ya, lelee batrị ahụ ka ọ ghara ịnọkwa ebe ọ nwere ike ọ gafere ntakịrị na njikọ ahụ na-akpata nkwụsịtụ oge.
I nwekwara ike ijide n'aka na kọntaktị niile dị ọcha ma na-emebi emebi.
Ọtụtụ eBikes nke oge a nwere nyocha nyocha iji gwa onye na-ere ahịa ihe na-eme ma ọ bụrụ na nsogbu. Systemsfọdụ usoro ndị ọzọ dị mfe bụ okwu mwepu, ebe a na-anwale ihe ọ bụla ruo mgbe achọpụtara ihe mebiri emebi.
Mgbe ụfọdụ ọ na - adị mfe dịka ịtụgharị eBike ma laghachi azụ. Ime nke a ga - emezigharị onye na - achịkwa gị ma nwekwaa ike ịgaghachi ọzọ.
Kpachara anya, na site na ịtọgharị, ọ na-egosi na enwere nsogbu na ị ka kwesịrị ka onye nyocha eBike nyocha ya.
Efọdụ eBikes bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi karịa ndị ọzọ na mgbe ụfọdụ ị na-nnọọ kechioma; mee ihe ị nwere ike ime iji lelee mpako na ọ joyụ gị anya, ị ga-anụ ụtọ ọtụtụ afọ nke eBiking obi ụtọ.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe: EBike ekwesịghị ịchọ mmezi ọ bụla karịa igwe ịgba ọsọ nkịtị, ọ bụrụhaala na ị na-emeso ya n'ụzọ ziri ezi.
Site na ọtụtụ ụdị dị iche iche, ụdị na ọnụahịa ọnụahịa, ịzụrụ igwe eletriki eletriki (eBike) nwere ike ịbụ usoro egwu.
Iji nyere gị aka na nyocha gị, etinyela m ihe nduzi siri ike iji nyere gị aka ịme mkpebi nke eBike ga-akacha mma maka gị. Nke a bụ onye na-azụ igwe eletriki igwe eletriki ..
Kama ịbubata gị oke nkọwa, okwu ndị a bụ 'Jargon Free' ma nwee ezi uche na onye kachasị ọhụụ nke onye na-agba ya, ọ bụ ụzọ dị mfe iji kpuchie ihe ndị dị mkpa.
Enwere otutu ihe iji kpuchie ya mere m emebi ya n'ọtụtụ usoro:
Style nke Electric Bike
Họrọ ụdị ejiji eBike iji kwado ụdị ịnya gị.
EBike na-eto eto nke ọma n'ime afọ ole na ole gara aga yana ọtụtụ ụdị, atụmatụ na ebumnuche dị iche iche.
Ndị si n’ụgbọ ụkwụ na-agba ọsọ mpịakọta na obere ndị njem na-agba ụkwụ agba; enwere otutu ụdị eBike ọ bụla onye ọrụ nwere ike ịchọ.
Iji nweta eBike ziri ezi, ị ga-eji nlezianya chee echiche banyere ihe mkpa gị na atụmanya gị bụ:
- Ọ bụrụ n ’ị na - achọ obere eBike ka ọ rapara n’azụ ụgbọ ala, eBike ị na - apịaji bụ azịza ya.
- Ọ bụrụ n ’ị na-aga ọrụ, lee obodo anya / ebe a na-ebugharị eBikes n’ebe ahụ.
- Maka ndị na-eme njem n'okporo ụzọ, eM nwere ụdị dị iche iche nke eMTB.
- Igha na-arụ ọrụ n'ime izu kamakwa mgbe ịpụsịrị ụzọ na ngwụsị izu? A eBike ngwakọ ga-anọ n'okporo ámá gị (na okporo ụzọ).
- Ọtụtụ ụdị niche ndị ọzọ dị; site na eTrikes gaa na igwe zuru agba agba carbon
- Kpachara anya na ị ga-eji ụdị ejiji na njiri rụọ ọrụ mgbe ị na-achọ eBike gị: ebe nchekwa eBike nwere ike iyi ka ọ ga - abụ nhọrọ bara uru, ọ bụrụ na ị na - eme atụmatụ ogologo jaunts yana ngalaba ụzọ, ọ nwere ike ọ gaghị adabara mkpa gị. Ikekwe ileba anya n'ụgbọ ala kwesịrị ekwesị kama.
Ihe Ndị Ọrụ Na-eme
Mee elu mee ihe obula i choro ka i choro. Ikwesiri iche banyere ihe bara uru di iche iche na eBikes.
Iji maa atụ: may nwere ike ilekwasị anya n’obere igwe gbara gburugburu nke ị ga-aga n’azụ ụgbọ ala, mana ewepụla nnukwu eBikes na-abụghị nke mpịachi nwere; folda ahụ nwere ike ịba uru ka ịpịa ma chekwaa, mana ọ bụrụ na eBike anaghị arụ ọrụ n'ụdị ịnya gị mgbe ahụ ị nwere ike ghara ịnya ya, na njedebe nke ụbọchị njem ahụ bụ ihe kachasị mkpa.
Ndị ahịa ọ bụla m hụrụ nwere mkpa dị iche iche. Mayfọdụ nwere ike ịdị obere karịa ma chọọ mgbatị nke siri ike ma dịkwa mfe ịbanye na apụ. Na nke a, otu dobe okpokoro nke na-enye ohere inwekwu obi ike mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè, ma ọ bụrụ na nkwụsị mberede na-enye gị ohere ịdata ụkwụ gị n'enweghị nsogbu na ngwa ngwa, ọ ga-abụ nhọrọ ziri ezi. Elela igwe kwụ otu ebe ma chee 'Nke ahụ dịka igwe kwụ otu nwanyị', lee ya anya ma chee etu ọ ga-esi baara gị uru.
Ihe ndị a bụcha ihe ị ga - ewepụ mgbe ị na - anwale igwe kwụ otu ebe (ihe anyị ga - emetụ aka na isiokwu a) mana ọ bara uru ịtụle ọbụlagodi na mbido ịhọrọ eBike gị.
Nha ụkwụ ụkwụ
Ihe jikọrọ ya na isi ihe ndị dị n'elu ma dị oke mkpa ịhọrọ ezigbo eBike; ijide n'aka na ị nwere oke wiil zuru oke ga-ekwe nkwa ma arụmọrụ na ọ enjoyụ na akụkụ hà.
Kwesịrị inwe ezigbo echiche ụdị ụdị eBike ị bụ ugbu a, mana kedụ ihe dị iche na nha ụkwụ na otu ngwa dị iche iche ha nwere?
Ugbu a ọ nwere ike ịbụ ntakịrị oge iji chọpụta nha mana achọrọ m igosipụta nke a ugbu a dịka nha nwekwara ike imetụta ụdị ụdị eBike ị na-achọ ịzụta. N'ezie size kwesịrị ịbụ otu n'ime ihe ikpeazụ anya na-ele anya ma; M na-agwa ọtụtụ mmadụ okwu na mgbe akparịta ụka banyere eBikes naanị nkeji ole na ole jụọ - "Kedu nha m chọrọ?".
N’ebe a nha pere mpe mana ị kwesịrị ịtụle nha elekere dị iche iche. N’oge ochie enwere nanị otu wheel ma ọ bụ abụọ ukwu dị. Ma ugbu a, dị ka ahịa ahụ gafere, e nwere ọtụtụ nha dịgasị iche ịhọrọ.
Aga m elekwasị anya na naanị isi ole na ole n’ekwughị ọtụtụ nkọwa.
700c: A na - ejikarị ‘nnukwu wiil’ a arụ ọrụ okporo ụzọ. Nnukwu dayameta na-ekpuchi ebe dị anya karị mgbe a gbanwere ya na mgbanwe zuru ezu karịa obere wiil.
700c na-egosipụtakwa n'ọtụtụ ịnyịnya ígwè / ngwakọ ndị nwere ike iji ya ma n'okporo ụzọ, yana isi ihe dị iche bụ nhọrọ taya: otu ngwakọ ngwakọ ga-enwe ntakịrị ahụ karịa nke okporo ụzọ zuru ezu, yana ọtụtụ nzọ ụkwụ na usoro iji kwekọọ n'ụdị ịnya ịnyịnya.
29 ”eMTBs wheeled (ma ọ bụ 29ers) na-adịwanye nkịtị, na-enye otu ikike ịtụgharị na nkasi obi maka ndị ọrụ na-apụ n'okporo ụzọ.
26 ”: Anotherdị ọzọ a ma ama bụ wheel 26”. A na-ejikarị ya eme ihe maka ọgba tum tum ugwu, wiil a dị obere mana ọ na-enye ohere ka njikwa na obere ụzọ na-agbanwe agbanwe karịa nwanne ya nwoke ka ukwuu.
Ha n'ozuzu ha na-enwe oghere sara mbara, nke na-eme mkpọtụ maka nkwụsị kachasị na njigide na ọnọdụ soggy. Nke ahụ kwuru, ọ bụ ihe a na-ahụkarị ụbọchị ndị a ka ndị nrụpụta jiri igwe 26 ”na igwe kwụ otu ebe obodo / na-agagharị agagharị na-eji ụzọ ụzọ dị larịị na nrụgide taya ka elu. Nke a na-enye ohere ka eBike nwekwuo ike ịrụ ọrụ nke ọma ma ọ naghị emebi nguzogide na-agba ọsọ na nnukwu taya ndị dị n'okporo ụzọ. O mechakwara wedata etiti ike ndọda ya mere ọ nwere ike bụrụ ihe kwesịrị ekwesị maka ndị ọrụ pere mpe karịa.
20 ”: will ga - ahụ ndị a n’ọtụtụ igwe kwụ otu ebe, ebe obere wiil na - enyere aka ime ka ọnụ ọgụgụ zuru ezu gbadaa.
Okwesiri icheta na obere obere wheel, obere ụzọ ọ ga-ekpuchi n'otu mgbanwe, nke nwere ike ime ka ọrụ siri ike na njem ndị toro ogologo.
E nwere ọtụtụ ndị ọzọ wheel nha, ma ndị a bụ ndị kasị ọsọ na eBike ụwa.
Ebee ka itinye ego gi?
Gị mmefu ego bụ nnukwu ihe na-achụ nta gị maka eBike. Na ọnụahịa dị mfe ruru ọtụtụ puku, ịkwesịrị ịdị njikere ịkwụ obere ụgwọ maka eBike karịa usoro mgbatị nkịtị.
Igwe eletriki igwe eletrik nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe ọ bụla ruo £ 10,000 + mana n'eziokwu, ọtụtụ n'ime ha na-amalite n'ihe dị ka £ 800 ma ruo ihe dịka £ 6000.
Teknụzụ ndị ọzọ dị na moto na batrị na-eme ka ego ndị ọzọ akwụ ụgwọ maka igwe kwụ otu ebe.
Ihe dị mma bụ na ka teknụzụ na-aga n'ihu na ọnụahịa ala, ị ga-ahụ na ị nwere ike iburu igwe nwere ntụkwasị obi maka ego zuru oke.
Dị ka ihe ọ bụla dị n'ụwa a ị na-akwụ ụgwọ maka ihe ị nwetara, yana maka eBikes nke a pụtara ịkwụ ụgwọ karịa maka ịdị mma, oke na ntụkwasị obi.
N’ezie akwụla ụgwọ karịa maka ihe ị chọghị; Ọ dị mfe iwepu ọchụchọ gị. Ahịa eBike na-asọ mpi oke; ọ bụrụ n’otu dị ọnụ karịa nke ọzọ, ọ na-abụkarị n’ihi ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na e webata eBike n'ahịa dị oke ọnụ, a ga-ahụ ya ngwa ngwa na onye nrụpụta ahụ ga-esiri ya ike ire.
Jikere maka mmefu ego gị ka ọ gbanwee ntakịrị, ma ọ bụrụ na otu eBike dị ntakịrị karịa mmefu ego gị mana ọ ga-arụ ọrụ ka mma na ịme ihe ịchọrọ ka ọ ghara ime ya.
Uschụ ọrụ na ịrụ ọrụ n'ihi na nke a mmefu ego nwere ike ejedebe na-eri n'ihu ala akara na ndozi na nnọchi.
Legharịa anya ma tunyere eBikes na ọnụahịa dị iche iche tupu ị kpebie na mmefu ego ikpeazụ. Achịkwala ihe ọ bụla. Na-agbanwe agbanwe.
Cheta na ị nwetara ihe ị kwụrụ, mana atụla ahịa na ọrụ ọfụma maka ya.
Akụrụngwa dị mkpa yana ọ na-abịaghachi na mmefu ego gị niile. O nwere ike ịbụ na i setịpụrụ ọnụ ọgụgụ n’uche gị ka ihe atụ kwuo £ 2000, ị nwere ike ugbua ahụla igwe kwụ otu ebe ị na-atụ anya inweta. Ma ihe dị na ngwa dịka okpu agha, uwe aka, uwe nchekwa, akpa, akpụkpọ ụkwụ wdg. Ihe ndị a nwere ike ịgbakwunye ngwa ngwa!
Ọ dịkwa mkpa ịkọwa ihe ndị dị ka mudguards, ọkụ, racks, mkpọchi wdg. May nwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ịnyagharị igwe kwụ otu ebe, ụdị ụfọdụ nwere ike ịbịa na bits dị ka mudguards, ọkụ na ogbe dabara dị ka ọkọlọtọ. Nke a dị mma, dịka onye nrụpụta jiri nlezianya họrọ ihe ndị kachasị mma maka igwe kwụ otu ebe na ọrụ dị n'aka. Ha nwere ike ịdịkarị nke ọma karịa ngwa ahịa mgbe emesịrị gbakwunye na ụbọchị ọzọ, ọ nwekwara ike ịdị ọnụ ala karịa ịzụta igwe kwụ otu ebe na akụkụ ndị a.
Ndụmọdụ m ga-abụ ịtọọ atụmatụ ego abụọ, otu maka igwe kwụ otu ebe n'onwe ya na onye ọzọ maka ngwa, n'ụzọ dị otu a ị naghị achụrụ ya àjà na njedebe ọ bụla. O doro anya na ụfọdụ ihe dị mkpa dịka ọmụmaatụ okpu agha. Mana cheta ụfọdụ akụrụngwa ị nwere ike ịzụta ma ọ bụ kwalite na ụbọchị ọzọ, na-ekwe ka mmefu ego gị na-agbanwe agbanwe n'oge a. Site n'ime nke a ị zere ịzụrụ ihe ị nwere ike ọ gaghị adị mkpa ma oge na-aga ị ga-amata ụfọdụ n'ime ihe ndị dị mkpa ịchọrọ.
Tydị Mkpụrụ Mkpụrụ, Nha Batrị & Ogologo
Agaghị m abanye n'ime batrị na ụdị moto dị iche iche n'ihi na a ga-ekpuchi ya n'isiokwu ọzọ; ma ọ bụ n'ezie ihe anya mgbe ịzụrụ igwe eletrik.
E nwere ụdị moto abụọ dị na ahịa: Hub drive na crank drive, ha na-arụkwa ọrụ n'ụzọ dị iche iche.
Hub drive bụ moto nke etinyegoro na wiil ma ọ bụ ụkwụ azụ. Ka onye ọrụ pedals a akara osisi emetụta ike site na batrị. Nke a ga - eme ka onye ọrụ ahụ mee ihe site na wiil azụ ma ọ bụ dọpụta gị site na wiilị mbụ. Uru nke sistemụ a bụ na ị na - agba ọsọ igwe dị elu iji kwado ụdị ịnya gị. Nwere ike gbanwee igwe iji rụọ ọrụ na ndị njikwa na batrị dị iche iche, ya mere ọ dị ọtụtụ ọrụ na arụmọrụ ya.
Crank mbanye bụ ebe moto na-ndokwasa na etiti na draịva na yinye onwe ya. Nke a na usoro bụ ihe ndị ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma dị ka onye ọrụ bụ n'ụzọ dị irè mgbe nile na zuru okè gia n'akụkụ moto unit mgbe pedaling na-atụ na n'ozuzu chọrọ a nta batrị na-arụ ọrụ.
Dị ka moto na-ndokwasa centrally na igwe kwụ otu ebe ọ ga-eme ka n'ihu ma ọ bụ azụ njedebe nke bike na-arọ. Uru ọzọ bụ na ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na ọnọdụ na-amị amị, ebe ọ bụ na enwere obere ohere nke wheel wheel ka a na-etinye ike ahụ. Enweghi 'ntughari' ma tinye ya na uzo karie.
Mmefu ego gị nwere ike bụrụ nnukwu ihe mgbe ị na-atụle ụdị draịva ị ga-aga. Crank chụpụrụ anyịnya igwe na-adị ọnụ karịa ndị ehiwe chụpụrụ ọzọ, ọ bụ ezie na e nwere ndị ọhụrụ crank mbanye Motors abịa ahịa mgbe niile na m hụrụ ụfọdụ ihe mmefu ego crank mbanye anyịnya igwe ugbu a-dị. Ọ bụrụ na ntụkwasị obi bụ isi; mgbe ahụ enwere ike gaa ihe ejiri nwaa ma nwale ya n'ahịa nwa oge. Maka mụ onwe m, m na-ere igwe kwụ otu ebe, ha bụ otu n'ime sistemụ a pụrụ ịtụkwasị obi nke ọma n'ahịa, N'uche m, m na-ahọrọ ụzọ ha na-eche mgbe a na-eji ya eme ihe, ọ bụ ụzọ mbanye karịa nke na-enweghị oke ọkụ ma ekwenyere m na ha na-arụ ọtụtụ Ka ugwu dị elu, +
Bestzọ kachasị mma gị bụ ịnwale sistemụ abụọ wee hụ n'onwe gị, nke na-eme nke ọma maka ihe ị chọrọ. Echefula ịnwale igwe eletrik eletrik n'elu ugwu siri ike!
Banyere batrị, nke a nwere ike ịbụ akụkụ nke ngwa ngwa nke eBike, na teknụzụ batrị ọhụrụ na-abịa n'ahịa n'oge niile. E nwere ọtụtụ ụdị, nke kachasị ewu ewu bụ sel lithium. Ndị a dị ọkụ karịa batrị ochie Ni-cad, na-adịkarị ogologo oge.
Ọzọ nke a bụ isiokwu ọzọ ọnụ ma a ga-akọwa ya nke ọma na edemede ọzọ.
Ibu nnukwu nke batrị ahụ ka ọ ga-ejidekwu.
Nwee ezi uche banyere kilomita ole ị ga - ekpuchi, n'ihi na ka ị na - arịgo elu, batrị nwere ike ịdị arọ ma bulieer. Cheta, gị dị ka onye na-agba ịnyịnya ahụ ga-agbatịkwu ihe a. Oge na mgbe ọzọ ana m agwa ndị ahịa chọrọ 'batrị ka ukwuu' n'ihi na akwụkwọ ka ikike ka ibu ka mma. Agbanyeghị mgbe m jụrụ - “N'eziokwu, kilomita ole ka ị na-eme?” Ọ dịkarịrị mgbe 50% nke batrị niile dị. Nke ahụ kwuru na ọ dị mma mgbe niile ịnwe ọtụtụ batrị na batrị mgbe ị na-agba ịnyịnya ka ị nwee udo nke uche ị gaghị ahapụ obere.
Ndụmọdụ m ga - eme: Emegharịla onwe gị anya site n'ịgụ ọtụtụ ihe banyere ụdị moto na batrị dị iche iche, isi ihe ịchọrọ ịchọ bụ ọrụ na oke. Gaa ma nwee ụdị ejiji dị iche iche, chọpụta oke gị wee soro ihe ga-adịrị gị mma.
Ule na-agba ịnyịnya
Ugbu a, nke a bụ akụkụ dị ụtọ! Ọ bụkwa akụkụ kachasị mkpa n’ime ihe niile.
Ikwesiri, ana m ekwusi ike ka ị gaa nwalee eBikes ole na ole tupu ị mee mkpebi gị. Emechaa, ọ bụrụ na ịnwaleghị ha, ị gaghị ama etu ha si eche ma rụọ ọrụ.
N'iji ụdị dị iche iche dị iche iche gbalịa ole na ole, ọ bụghị otu ma ọ bụ abụọ, mana ole na ole iji nweta ezigbo atụnyere. Ọ bụrụ na ịnwaleghị ọtụtụ, ị nwere ike ịhapụ otu nke zuru oke maka gị.
Mgbe ịnwale ịnyịnya:
- Gbalịa eBike na ọkwa dị iche iche na ọkwa dị iche iche nke inye aka (ọ bụrụ na ọ nwere nhọrọ), yana n'ọtụtụ njikọta enwere ike ị nwere ike inwe ọfụma maka igwe kwụ otu ebe.
- Ọ dịghị mma ịnya elu na pavment iji ruo mkpebi. Rigo ugwu buru ibu, n'elu ugwu, banye ma gbanyụọ oge ole na ole, bulie ya, nwee mmetụta nke ibu, nwalee gia, brek wdg.
- Nye ya ezigbo nyocha zuru oke iji jide n'aka na ọ na-ezute atụmanya gị.
- Gbalịa nke dị n'okpuru mmefu ego gị na nke ọzọ dị elu karịa mmefu ego gị ka ị nwee ike ịhụ ihe ị na-enweta maka ego gị. May nwere ike ịchọta onye dị ọnụ ala karịa otu ga-egbo mkpa gị, ma ọ bụ ịnwere ike ịchọta na onye hụrụ gị n'anya ga-akwado gị nke ọma na ndụ ya niile.
Nke a ga - enye gị ohere ịgwa ndị na - ere ahịa okwu; ị ga-amụtakwu ọtụtụ ihe n'ụzọ dị otu a karịa ịgụ onwe gị dị ka onye na-ere ahịa na-eme taa. Onye ọ bụla na-ere ahịa ga-ekwu na eBike kachasị mma, mana ha ga-enwe ike iduzi gị ọzọ ma tụọ atụmatụ ị nwere ike ịchọpụtaghị na akwụkwọ. N'ihi nke a, gakwuru ndị na-ere ahịa dị iche iche wee chọpụta n'uche gị eBike nke dabara adaba maka gị.
Nkwado & ndabere
Nkwado na nkwado ndabere dị mkpa maka nzụta gị. Nke a na-emekwa ka anyị laghachi ileta ndị na-ere ahịa dị iche iche ka ị mata onye ị chere na ọ ga-elekọta gị ogologo oge. Ọ dịghị mma ịzụta eBike ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị gbadaa, ị ga-abanye na nsogbu ma nwekwaghị nkwado.
Onye ọ bụla na-emeputa nkwa iche; isi ihe bụ ịzụta ihe nwere ụdị nkwa ọ bụla nwere nsogbu. Ga-ahụkarị nkwa dị iche iche maka akụkụ eletriki nke eBike, na etiti na akụrụngwa. Ihe ndị a dịgasị iche mana n'ozuzu ị ga-ahụ nkwa nke afọ 2 na eletriki, yana afọ 5 ma ọ bụ ọbụlagodi oge ndụ na etiti wdg.
Gbaa mbọ hụ na ị gụrụ obere mbipụta: Ihe nrụpụta onye nrụpụta maka “ntụpọ n’ihe” dị iche na “enweghị nkwa”.
Ọzọkwa biko mara na batrị nwere ike a oge na-adịru oge akwụkwọ ikike n'akụkụ a ụgwọ okirikiri akwụkwọ ikike. Ọmụmaatụ ọ pụrụ ịbụ naanị ọnwa 6 ma ọ bụrụ na ọ kpuchie ihe ụgwọ cycles karịa akwụkwọ ikike na-ekwu na ọ na-apụghị-anabata.
Kpachara anya maka ndị nrụpụta na-enye onyinye dị oke oke ma ọ bụ dị mkpụmkpụ, nke a na-akụ mgbịrịgba mkpu na ha onwe ha enweghị okwukwe na ntụkwasị obi nke ngwaahịa a.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwa niile dị oke dị ka, na njedebe nke ụbọchị, eBike bụ akụkụ na-akpụ akpụ; bits ga-eyi oge na-aga na batrị ga-emesịa hapụ ike.
Ndụmọdụ m ga - abụ ịzụta n'aka ebe ị nwere ike ịlaghachi azụ ma ọ bụrụ na enwere nsogbu, yana ụlọ ngosi ihe ngosi anụ ahụ ị nwere ike ịga leta n'onwe gị karịa ịkpọ ọtụtụ oku ekwentị na ịgha ụgha banyere ngwugwu igwe kwụ otu ebe ma nyefee ya maka nloghachi. Ikekwe lelee ebe ndị nwekwara ike ịrụ ọrụ igwe kwụ otu ebe gị ka ịchekwa ya ruo ogologo oge.
Ọrụ na ndozi -
O doro anya na eBike ọ bụla ga-achọ mmezi oge, ma agbanyeghị akụkụ eletrik nke a n'ihi na ọ na-achọ obere mmezi.
Ọtụtụ ndị na-abụghị eBikers kwenyere na igwe eletrik na-ejikwa nsogbu mmezi mana nke a abụghị eziokwu. Y’oburu n’onwere iji ihe ime ka igwe gi ka ogha n’iru, ogaghi acho karie igwe eji agba. Ka emechara ma ọ bụrụ na ị na-emeso eBike gị ọ ga-eme gị nke ọma na nloghachi.
Otú ọ dị, isi ihe dị ugbu a bụ ime ka igwe kwụ otu ebe dị ọcha. Gbaa mbọ hụ na kọntaktị eletriki niile anaghị emebi emebi. Ọ dịkwa mma ịnweta ọrụ igwe kwụ otu ebe dịka mgbe ọ chọrọ ya na idobe ndekọ ndekọ ọrụ (Nke a ga - enyere aka ma ọ bụrụ na ị bia ree eBike n'ihu ala).
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa ga-enye ntọala zuru oke na igwe kwụ otu ebe, nke dị mkpa, ebe ọ bụ na eBike kwesịrị ịtọ nke ọma na nke mbụ iji rụọ ọrụ nke ọma.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, eBike ekwesịghị ịchọ mmezi karịa igwe kwụ otu ebe ọ bụrụhaala na gị - onye ọrụ ji ya eme ihe.